Ubungakanani obuhle begumbi eliphindwe kabini eNottingham
Igumbi lakho lokulala e iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) sinombuki zindwendwe onguEmma
Ubungakanani obuhle begumbi eliphindwe kabini kwindlu eneempawu ngaphakathi komgama olula wokuhamba ukuya kwiziko lesixeko saseNottingham. Apartment ngaphakathi kwindonga enkulu egadini. I-Toast, iicereals, iyogathi kunye neziselo ezishushu kwisidlo sakusasa. Ndihlala ndinobisi kunye nobisi oat, kodwa ukuba ungathanda ezinye iindlela nceda undazise kwangaphambili.
Ubungakanani obuhle obuphindwe kabini kwiflethi eneempawu ezikumgangatho ophantsi. Ibhedi ephindwe kabini, isifuba sedrowa kunye neetawuli ezintsha.
Kukho igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo ecaleni kwegumbi lokulala elinebhafu kunye neshawari.
Eli gumbi lilungele ngakumbi abantu abadala aba-1 okanye aba-2. Kukho ibhedi yesitulo ukuba anifuni ukwabelana ngebhedi. Le yibhedi etofotofo enomandlalo olungileyo.
Iindwendwe zabelana ngokufikelela kunye nabanini kwindawo yokuphumla enkulu ukuze baphumle, babukele iTV okanye bafunde. Ibandakanya i-wifi yasimahla. Kukwabelwana ngokusetyenziswa kwekhitshi elifakwe ngokupheleleyo.
Iifestile ezinkulu ezikhokelela kwigumbi lokuhlala ngaphezulu kokujonga igadi.
Isidlo sakusasa selizwekazi siquka ukutya okuziinkozo, isonka/ithowusti, iyogathi, iijam, iti kunye nekofu. Ezi zinto zingentla zibonelelwe ukuba uzenzele isidlo sakusasa.
Kukho ivenkile yasekhaya yaseSainburys kwisikhululo setram esikufutshane kunye noluhlu lweendawo zokutyela ezahlukeneyo zobuhlanga kunye neevenkile nje ezimbalwa zokuhamba ngendlela ebonelela ngeendlela zokutya ezifikeleleka ngokulula. Kukho indawo yokupaka yesitalato engathintelwanga kanye ngaphandle kwesango.
Indlu yethu yindawo encinci ye-oasis kwindawo ephithizelayo, singaphakathi kwigadi enkulu ebiyelwe ngodonga ebonelela ngokuzola kunye nokungasese.
INottingham sisixeko esithandekayo sokutyelelwa. Iithiyetha ezigqwesileyo, iicinema, umculo, iigalari kunye neNottingham Castle. Zininzi iindawo ezinomdla kwimbali nakwindawo ezijikeleze isixeko. Iivenkile ezinkulu ezineendawo zokutyela ezininzi, iiklabhu, iikhasino, ii-pubs kunye nemivalo.
Ababuki zindwendwe banobuhlobo kwaye bayahlalisana ngelixa kwangaxeshanye bezimele kwaye bexakekile.
Zonke iindwendwe zahlukile umz. abanye bayabuthanda ubumfihlo babo, abanye bayathandeka kakhulu, ngoko sisebenzisana ngokufanelekileyo ngokokhetho lweendwendwe apho kunokwenzeka.
Zonke iindwendwe zahlukile umz. abanye bayabuthanda ubumfihlo babo,…